Rugby – Championship 2020 : tsy handray anjara ny Springboks Afrika Atsimo - ewa.mg
News - Rugby – Championship 2020 : tsy handray anjara ny Springboks Afrika Atsimo
Hataraina ny an’ny
rehetra naharay ny taratasy avy amin’ny federasiona rugby ao Afrika
Atsimo (Saru) fa tsy handray anjara amin’ny fiadiana ny
“Championship 2020” ny Springboks.
Noho ny valanaretina “covid 19”
mbola ma­mely ao Afrika Atsimo sy ny tsy fisian’ny sidina,
nanambara tamin’ny fomba ofisialy, omaly zoma 16 oktobra ry zareo
Afrikanina tatsimo, fa tsy handray anjara amin’ny fiadiana ny
“Champion­ship 2020”, taranja rugby ny Springboks.
Fihaonana, tanterahina any Aostralia, ny 31 oktobra ka hatramin’ny
12 desambra ho avy izao. Toy ny valan-da­tsaka no nandraisan’ny
rehetra ity fanapahan-kevitry ny federasiona rugby Afrika Atsimo
ity, tapa-bolana mialoha ny hanombohan’ny fifaninanana. Anisan’ny
ekipa tena andrasan’ny rehetra mantsy ry zareo Springboks,
tompondaka eran-tany. “Tsy manan-tsafidy izahay ary koa tsy afaka
ny handahatra mpilalao tsy misy antoka ho an’ny fahasalaman’izy
ireo ny federasiona”, hoy i Jurie Roux, tale mpanatanteraka eo
ani­von’ny federasiona afrikanina tatsimo.
Olana ho an’ny Spring­boks, araka ny nambaran’i Jacques Nienaber
mpanazatra, tsy mbola nandray baolina mihitsy na niatrika
fifaninanana ireo mpilalao afrikanina tatsimo, taorian’ny
niatrehany ny famaranana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany
fa­rany teo, izay nikatrohany tamin’i Angletera, ny 2 no­vambra
2019. Farafaharatsiny manko nahavita 500 mn avy ry zalahy vao afaka
miatrika fifaninanana, araka ny nolazain’ny mpanazatra hatrany.
Araka izany, tsy misy afa-tsy firenena telo ihany izany no
hifanandrina amin’ity “Championship 2020” ity dia ny All Blacks-n’i
Nouvelle-Zélande, ny Pumas-n’i Ar­zantina ary ny Wallabies-n’i
Aostralia, izay mpampiantrano ny fihaonana.
Marihina fa noho ny fisian’ny valanaretina “covid 19”, tanterahina
amin’ny firenena tokana ny lalao rehetra, amin’ ity andiany
L’article Rugby – Championship 2020 : tsy handray anjara ny Springboks Afrika Atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fifidianana filohan’ny Caf: andrasana ny fanapahan-kevitr’i Ahmad
Notapahin’ny fivoriamben’ny Kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf), ny alakamisy lasa teo fa tsy miova ny daty hanatanterahana ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana izany. Miandry ny fanapahan-kevitry ny filoha am-perinasa ny rehetra. Notazomin’ny Kaon­fe­derasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf), ny datin’ny 12 marsa 2021, hanatontosana ny fifidianana izay ho filohany. Niova kosa ny toerana hanaovana izany. Raha i Maoritania no voatondro tany am-boalohany dia nafindra any Rabat, Maraoka indray izany, tamin’ity. Vaovao iray lehibe andrasan’ny rehetra ny ho fanapahan-kevitry ny filoha am-perinasa, i Ahmad, na ho kandidà ny tenany na hijanona tamin’iny taom-piasana tokana iny. Raha ny tsilian-tsofina, mety mbola ho kandidà ny tenany. Mbola naka ny hevitr’ireo filohan’ny federasiona nanohana azy tamin’ny taona 2017 mantsy ny tenany. Raha tsiahivina, nandresy tamin’ny isam-bato 34 tamin’ireo federasiona 54 izy. Raha toa ka voatazona io isam-bato io, azo antoka ny mbola haha mpifaninana azy. Marihina fa anisan’ny tombony ho an’i Ahmad ireo filohana federasiona avy amin’ny tapany atsimon’i Afrika na ny Cosafa, izay miisa 14. Tsiahivina fa nisokatra, nanomboka omaly zoma 11 septambra, ny fandrotsahana ny taratasy filatsahan-kofidina ho an’ireo kandidà, izay tsy hifarana raha tsy ny 12 novambra ho avy izao. Ny 11 janoary 2021 kosa no hamoahana ny anaran’ireo mpifaninana nahafeno ny fepetra amin’izay ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf), ho an’ny taom-piasana efatra manaraka, 2021 ka hatramin’ny 2025. Tsiahivina fa i Ahmad no kandidà voalohany nanova ny isan’ny ekipam-pirenena ho 24 mandray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), raha toa ka 16 hatrany izany, hatramin’izay. Nandritra ny fitondran’i Ah­mad ihany koa no niatrehan’ny Barea de Madagascar ny Can voalohany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra ma­la­gasy. TompondakaL’article Kitra – Fifidianana filohan’ny Caf: andrasana ny fanapahan-kevitr’i Ahmad a été récupéré chez Newsmada.
Praiminisitra Ntsay Christian: “An’ny filoha ny momba ny governemanta”
“Mipetraka izao ny Antenimierampirenena. Araka ny And. 54 ao amin’ny lalàmpanorenana, ny filohan’ny Repoblika no hahazo ny soso-kevitra amin’izay tokony handrafetana ny governemanta izay. Ataoko fa hanatanteraka izany antsakany sy andavany ny filohan’ny Repoblika.”Izay no navalin’ny Praiminisitra Ntsay Christian tany Vatomandry, afakomaly, momba ny governemanta taorian’ny fivoahan’ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka. Mazava fa nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny valin’ny fifidianana solombavambahoaka. Mirary sahady an-dry zareo hahavita antsakany sy andavany ny asany izy.Misaotra manokana ny vahoaka malagasy koa ny praiminisitra. Satria tao anatin’ny herintaona izay, fifidianana telo lehibe no natao teto Madagasikara. Teo ny fihodinana voalohany sy faharoa tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka.Misy ny fitoniana sy ny filaminana. Iaraha-mahalala izany. Nisaorany manokana ny vahoaka malagasy, nampiseho izay fahendrena iombonana izay. Ary naseho ny maha zava-dehibe ny soatoavina malagasy: ny fihavanana. Tao anatin’ny fihavanana no nanatanterahana ireny fifidianana ireny.R.Nd.L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “An’ny filoha ny momba ny governemanta” a été récupéré chez Newsmada.
Ny sabotsy teo no nitranga ny halatra fiara tamin’ny fanaovana taratasy sandoka sy laharan’ny fiara hosoka. Tovolahy iray mpanao asa mpanamboatra fiara bokan-trosa avy ao Moramanga no nanao izany izay tratran’ny zandary ambodiomby tao Sahavalaina Brickaville ny sabotsy alina nifoha ny alahady maraina teo. Raha ny fanazavana dia tonga teto Toamasina ity rangahy ity ny zoma, ka raha ny taratasy hosoka efa teo aminy dia fiara “forgeon” no saika hangalariny saingy tsy nahita izany izy, ka fiarakaretsaka iray 306 no nokendreny hitadiavany mpividy. Ny sabotsy maraina no nahitany ilay fiarakaretsaka ka nanao mody mpandeha aloha izy nijereny ny momba ny fiara ka 5.000 ariary ny saran-dalana tamin’izany. Raha hitan’ilay rangahy mpangalatra fiara fa azo hamidy tsara ilay fiara 306 fiarakaretsaka dia nifanome fotoan izy roa lahy ny alina fa hanao “special” ha 60.000 ariary ny saran-dalana. Nisotro tamina trano fisotroana iray izy ireo, rehefa tena alina ny andro dia nirahany mody nividy zavatra ilay mpamily fiarakaretsaka, ka teo no nanararaotany nanisy fanafody “valium” mampatory ny ranomboakazo nosotroin’ilay mpamily raha nisotro toana ilay rangahy hangalatra ny fiara. Vao hitany fa nandaitra ny paikadiny dia nandeha amin’izay izy ireo, ka raha nahita ilay mpamily manomboka rasi-tory ilay rangahy mitetika hangalatra ny fiara dia nofatorany tamina “scotch” ilay mpamily ary nofatotany tamin’ny sezan’ny fiara. Efa teny an-dalana mihazo ny lalam-pirenena faharoa izy ireo no nisy nahatsikaritra ka ireo nahita izany no nampandre ny zandary mpanao sakan-dalana tao Sahavalaina Brickaville, ka tao no nahatrarana azy ambodiomby. Araka ny fanazavana hatrany dia nokasainy ho vonoiny hatsipy anaty rano ilay mpamily miala an’i Brickaville, saingy izy izao tratra izao ka mbola manaraka fitsaboana ilay mpamily noho daroka sy ny fanafody “valium” marobe laniny. Miandry fitsarana ao ambalatavoahangy ilay rangahy nikasa hangalatra fiara taorian’ny fiakarany fampanoavana sy mpitsara mpanao famotorana omaly tolakandro. Malala DidierL’article Moramanga : Mécanicien bokan-trosa tratra nangalatra fiara a été récupéré chez Midi Madagasikara.